फेसबुकद्वारा कम्पनीको नाम परिवर्तन गरी मेटा राख्यो, के के भए तपाईको फेसबुकमा परीवर्तन ? – Vision Online News
फेसबुकद्वारा कम्पनीको नाम परिवर्तन गरी मेटा राख्यो, के के भए तपाईको फेसबुकमा परीवर्तन ?
भिजन अनलाईन न्युज संबाददाता प्रकाशित: १२ कार्तिक २०७८, शुक्रबार ०५:१३ 171 पटक हेरिएको
अमेरिका, कार्तिक १२ ।
सामाजिक संजाल फेसबुकले आफ्नो कम्पनीको नाम परिवर्तन गरेर मेटा राखेको छ । कम्पनीले सामाजिक सञ्जालभन्दा बढी भर्चुअल रियालिटीजस्ता क्षेत्रमा आफूलाई विस्तार गरिरहँदा नयाँ नामले आफूले गर्ने गरेको कामलाई विस्तृतमा समेट्ने फेसबुकका डेभलपर मार्क ज़ुकबरले सामाजिक संजाल फेसबुकबाट जानकारी गराएको छ ।
यो परिवर्तन केवल फेसबुक, इन्स्टाग्राम वा ह्वाट्सयापजस्ता कुनै एउटा प्लेटफर्मका लागि लागु हुने छैन। माउ कम्पनीको नामनै परिवर्तन गरिएको हो । एकजना पूर्व कर्मचारीले कागजातहरू चुहाई फेसबुकबारे नकारात्मक विवरणहरू सहितको समाचार आइरहेका बेला कम्पनीले यो नयाँ नाम घोषणा गरेको हो ।
ती पूर्व कर्मचारी फ्रान्सेस हाउगनले फेसबुक कम्पनीले ‘सुरक्षाभन्दा माथि नाफा’ राखेको आरोप लगाएकी छन् । सन् २०१५ मा अर्को ठूलो प्रविधि कम्पनी गुगलले पनि आफ्नो माउ कम्पनीको नाम परिवर्तन गरेर अल्फाबेट बनाएको थियो । फेसबुकका प्रमुख मार्क जकरबर्गले “मेटाभर्स“ बनाउने योजनाहरू सार्वजनिक गर्दै कम्पनीको नयाँ नाम घोषणा गरेका हुन् ।
मेटाभर्स एउटा यस्तो अनलाइन दुनियाँ हो जहाँ मानिसहरूले भीआर हेडसेटको प्रयोग गरेर काम गर्न, खेल खेल्न वा सञ्चारका लागि प्रयोग गर्न सक्छन् । उनले अहिलेको नामले सम्भवत आफूहरूले अहिले गरिरहेको वा भविष्यमा गर्ने सबै कामको प्रतिनिधित्व नगर्ने भएकाले नाम परिवर्तन गर्नुपरेको बताए । कम्पनीले बिहीवार क्यालिफोर्नियास्थित मेन्लो पार्कको मुख्यालयमा नयाँ लोगो पनि सार्वजनिक गरेको छ।
जकरबर्गले भने, ‘फेसबुक कम्पनीको नयाँ नाम परिवर्तन भएर मेटा राखिएको भएपनि यसले सोसल मिडिया प्लाटफर्महरु फेसबुक, इन्स्टाग्राम तथा ह्वाट्सएपको नामलाई असर गर्ने छैन । केवल यी प्लाटफर्महरुको मातृ कम्पनीको नाम परिवर्तन भएर अबदेखि मेटा रहनेछ ।
नयाँ नाम सार्वजनिक गर्ने क्रममा सिइओ जुकरबर्गले विद्यमान ब्राण्ड नामले कम्पनीले हाल गरिरहेका कामहरु तथा भविष्यमा गर्ने कामहरुलाई समेनट्न नसकेको हुनाले यसको नाम परिवर्तन गर्नुपरेको बताए ।
नाम घोषणाको भर्चुअल कार्यक्रम जुकरबर्गले भनेका छन्– समयसँगै मलाई आशा छ हामीलाई यसलाई एक मेटाभर्स कम्पनीको रुपमा देख्नेछौँ । हामीले जे बनाउन जाँदैछौँ त्यसमै आफ्नो पहिचान र काम अडियोस् भन्ने म चाहन्छु ।
हाल कम्पनीले दुई भिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेको र त्यसमध्ये एउटा सोसल मिडिया एपहरुको परिवार र अर्को भविष्यमा प्रविधिहरुको प्लाटफर्म रहेको जुकरबर्गको भनाइ छ । नयाँ नामसँगै प्रयोगकर्ताहरुले भविष्यमा कम्पनीका अन्य सेवाहरुको प्रयोग गर्दा पनि फेसबुक नै प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता नरहने जुकरबर्गले जनाएका छन् ।
नेकपा माओबादी केन्द्रको पालिका अधिबेशन सम्पन्न, प्रचण्डद्धारा एमालेको १० औँ महाधिबेशनलाई कुम्भ मेलाको संज्ञा 50 views